Daryeelka Timaha Xiniinta 2018 | Istaraatiijka Ilaalinta & Maaraynta
Sidee loo Sameynayaa Fidintaada Ugu dambeyn ku dheji habka ku habboon iyo dayactirka!
Ku dhaq fariimo ka hor intaadan xidhnayn:
Aad ayey muhiim u tahay inaad ku darto ballaarintaada qaboojiyaha keliya ka hor inta aan la rakibin. Tani waxay caymis siinaysaa timaha waa jilicsan oo bilaash ah.
Waxaan ku talinaynaa Aussie Moist ama Herbal Essence Gacan-siinta Fiida (waxaa laga heli karaa Walmart iyo dukaamada quruxda badan ee xaafadaha) ama shardi kasta oo loogu talagalay dharka timaha adag.
Iska ilaali xiriirka dhammaan baayacmushtarkaaga, gabi ahaanba qoyi biyo diirran ilaa dhammaan dhinacyada cufan. Cabbiraha oo kaliya, markaa timaha ku dheji leh shanlo dhaadheer, Burburka Denman, buraashka cawska ama cirridka ilkaha ku sii shanleeyaha timaha adigoo timaha iska sii dara.
Waayo, Kinky Textures Curly kordhinta timaha kor u xiirto oo timaha u oggolow hawo qalalan. WAXAAN KA CIYAARIN KARTAA WAQTIGA CIYAARTA IYO CIYAARIYADA KUBADA! Ha ku qasbin qallajinta timaha.
Waayo, Dhaqanka Afro Kinky timaha ku sii foorso shukumaan iyo u ogolow hawo qalalan, tani waxay ka hortagi doontaa qulqulka weyn. Waxaad xiri kartaa qoryaha haddii aad doorato. Fadlan isticmaasho ilig ballaaran oo soo socda si ay u xakameyso marka timo qoyan yahay iyo Rugta Denman si ay u qeexaan curiyaha. Ha ku qasbin qalalan.
Waayo, saxarada toosan ee kinky waad hawaxi kartaa ama qalajin kartaa timaha.
Waayo, Perigs fadlan fiiri fiidiyowga barbaradka hoose. Waxaad arki doontaa sida xayawaanku u egyahay sawirka.
Halkan waxaan ku yaal MyNaturalHairExtensions.com waxaan rumaysanahay in aad ujirta ugu badan bangiyadaada. Gadashada timaha wanaagsan kaliya ayaa kaa qaadeysa! Daryeelka timaha ee habboon, talooyinka styling, iyo dayactirka ayaa xaqiijin doona mudada dheer ee kordhintaada.
Jooji Daadinta ka hor inta aan la soo saarin!
U ogolow kaliya inay la soo baxaan xaqiiqooyinka, DHAMAAN SHIRSII ... laakiin waxaa jira siyaabo aad u yareynaya daadinta. I do not know
Marka hore fadhi seerahaaga. Tani waa muhiim! Waxaanu ujirnaa xaashida dharka oo lacag yar oo ah $ 10.
Marka labaad, ha isticmaalin buraashka cadayaanka ah markay u muuqdaan inay qabsadaan fiilooyinka timaha shakhsi ahaaneed waxayna ka soocaan tuugada. Markasta isticmaal shanlooyinka ballaaran ama buraashka jilicsan.
Nadiifi oo Xayawaankaaga Xaji haboon!
Si aan u nadiifino timaha waan ku talinaynaa Giovanni's Nadiifinta Nadiifinta Shambo. Beddel qiimo jaban waa Daawada Nuclearka Shaambada.
Si aad u aragto timaha waxaan ku talinaynaa Cagaarka Asaasiga ah Isbeddel Xoog leh (xaanshiyaha #1) ama wixii shardi ah oo loogu talagalay timaha qallafsan / jilicsan. I do not know
Xaqiiji in dhammaan dhageysatadu ay mar horeba u jajaban yihiin oo ay jiidaan jihada sida haddii ay bixiyaan qaybta 2. Madaxaaga ku dabool hal dhinac hoostiisa oo u ogolow biyaha inay dhamaystiraan timahaaga, oo ka shaqeeya hal dhinac hal mar. Ku dar shaambadaaga calaacashaada oo gacmahaagana hoos u riix dharkaaga ilaa caarada. Ha xoqin ama ha farin timo si aad u sameysid bac ah maaddaama ay taasi abuuri karto oo kaliya uun calaamado aan loo baahnayn! Sii wad inaad ku riixdo gacmahaaga iyada oo timahaaga ku saabsan daqiiqado 5. Biyo raaci adiga oo biyo u oggolaanaya timahaaga sidii hore, waxaad ku riixi kartaa gacmahaaga timahaaga si aad u dhaqaajiso habka biyo raacinta laakiin xusuuso HA JOOJINin ama faraha timaha. Ku tirtir shukumaan iyo timaha u ogolow in AIR DRY
Isticmaal habka isku midka ah ee xaaladdaada iyo maydhashada
Shamboo: Qiyaastii toddobaad kasta 3
Co-Wash (dhaqdhaqaaqa dhaqashada): Inta badan sida loo baahan yahay
Ka hor inta aanad sariirta aadin:
FIIRO GAAR AH OO DHALINYARADA IYO WAX KASTA
Aad ayey muhiim u tahay in aad maareyn karto timaha ka hor intaadan sariirta aadin. Timahaaga kor ha ugu xiran habeenkii oo leh hal xariir ah / satinbool ama kabo / satin ah. Xirfadaha badeecadaha siinaya dhererka dhererka dheer waxay shaqeeyaan ugu fiican. (fiiri bogga sare)
Wixii dokumuuqyo qallafsan / qallafsan waxaanu kugula talineynaa inaad 5-10 weyn ku soo rogto timahaaga ama xayiraadyada timahaaga ka dibna waxaad ku shubeysaa hoostiisa.
Wixii sifooyinka tooska ah waxaan kugula talineynaa inaad gashato timaha kadibna waxaad ku dhejisaa silk / satin.
Ka dib habayntan habeenkii ah waxay kordhin doontaa kordhintaada, wanaajiso, ka hortag barashada taasoo keenta daadinta xad-dhaafka ah.
Ku daawee xoojintaada sida haddii ay timaado dhabtaada dhabta ah ee dhabta ah!
WAA MAXAY TAHAY MUUQAALKA MUHIIMKA AH: Haddii aad jeceshahay kordhintaada waxay dib kuu jeclaan doonaan! Waa kuwan qaar ka mid ah "Do & Donts" ​
u oggolow in timahaagu hawo qalajiyaan haddii aad go'aansato inaad qallajiso qalalan marwalba isticmaal kuleyliyaha kuleyliyaha
markaad timahaaga ku dhejiso alaab kuleylka ah marwalba isticmaal kuleylka kuleylaha HALISTA adigoo isticmaalaya dharka tufaaxa. Xooga kuleylka kuleylka badani wuxuu keeni karaa dhaawac kuleyl ah oo isbeddelaya (loosen) qaabka dabiiciga ah ee dabiiciga ah. Walmart waxay leedahay dad badan oo ilaaliya kuleylka si ay u doortaan. Xakamaynta John Freida ayaa jabisa buufinta difaaca dabiiciga ah waa mid fiican oo loo isticmaalo sababtoo ah miisaankoodu yar yahay iyo saliid la'aan. I do not know
Raac jadwalka habeenkii ama samee adiga kuu gaar ah.
Raac nadiifinta nadiifinteena saxda ah.
Isticmaal kareemada jilicsan iyo shanlooyinka dhaadheer
Xooga Xoogaaga timaha badanaa
Haddii aad isticmaasho adeegyo midab leh, dhaylo, xirmooyin cadcad, ama midabyo joogto ah u hubso inaad raadsato xirfadle xirfadle ah ama farsamayaqaan midab leh. Ma damaano qaadno tayada ka dib wax kasta oo isbeddel ah kiimikada markaa fadlan hubi inaad ilaaliso maalgashigaaga.
HA KALA DUWAN QAADASHADA ADEEGYADA DHAGAYSIGA! Timuhu waxay u egtahay jilicsanaan iyo miyir-qabasho marka qalabka la isku daro. Haddii aad yeelatid xayawaan aad u jilicsan oo aad rabto in aad timo timaha ama aad yareyso qaboojiyaha kaliya isticmaal qadar yar oo ah serum-ka-qaboojiye-wareersa. Haddii alaabooyinka lagu daro waxaad ka saari kartaa adoo isdabajooga leh Qalabka Cabbitaanka Is-beddelashada "Green Water Essence" iyadoon la keenin qallalan.
Waligaa ha isku dayin inaad ku sharaxdo, dhaqdo, ama gartid timahaaga markaad daallan tahay ama aad u kacsan tahay! Tani waa qadar for niyadjab iyo waxay kaa dhigi doontaa inaad aad u xoqdo timahaaga. I do not know
ha isticmaalin buraashka cadayga.
Ha isku dayin wax isbeddel kiimiko ah oo aan timaha lahayn hagid xirfadeed
Daryeelka timaha ee walax kasta
WAXAAN KA HELI KARAA BURNIISKA HALKAN! Taa bedelkeeda habka ugu wanaagsan ee lagu dabooli karo waa biyo qaboojiye iyo ilig ballaaran oo yimaada. Qalabka ciriiriga ayaa sidoo kale u shaqeynaya. Isticmaalka buraashka Denman wuxuu noqon karaa mid aad u adag, wakhtiga waxtarka leh iyo timirta ka soo qaadi kara timo. Ha isku dayin inaad timo timaha marka ay qalalan tahay. Hubso in ay tahay mid aad u qulqulay biyo iyo quwad.
Timaha ayaa si fiican ugu riyaaqa adoo ku daboolaya bareegyada. Wax walbo oo walxaad u eg oo aad jeceshahay timahaaga dabiiciga ah ayaa loo isticmaali karaa tan. Timaha ayaa jecel moister sida 4b 4c. Dheecaan ka soo baxa oo dibedda ka soo baxaa wakhti yar oo timo leh oo leh timaha waxayna ka caawisaa curiyaha si ay u fidiyaan!
Eeg Qodobkan ku taxan boggan.
Waxaan kugula talinaynaa adigoo isticmaalaya buraashka Denman ama ballaadhan oo timo leh. Timaha sida afduubka afku wuxuu jecel yahay qoyaan. Kaliya fasax iftiin ah oo ku yaala qufac iyo biyo ayaa si fiican u shaqeeya.
Marka caydhinta loo isticmaalo buraashka Denman sidoo kale curcurka ayaa ku dhaji.
Kinky toos ah, Perm Yaki, qalafsan yaki, Lafo toosan:
Timuhu waxay u baahan yihiin dayactir aad u yar mana jecla badeecooyin badan. Si fiican uguma dhaqmi doonto alaabada wax soo saarka.
Haddii ay suurtogal tahay isku day inaad timo timahaaga habeenkii si aad u yareyso miyir-qabka iyo in la abuuro meel qurux badan maalinta xigta.
Waad ku mahadsantihiin booqashada Xayawaanka Timaha ee Dabiiciga ah!
Afro Kinky Ku dhaq Maalinta Maalinta